Maraykanka oo ka hadlay Soomaali dib loogu celiyey Muqdisho | SAHAN ONLINE
Maraykanka oo ka hadlay Soomaali dib loogu celiyey Muqdisho
NEW YORK – Waaxda Fulinta Arrimaha Socdaalka iyo katamada ee ICE ayaa xaqiijisay celinta muwaadiniin u kala dhalatay Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo laga kala dejiyey Nairobi iyo Muqdisho.
Qoraal kasoo baxay ICE ayaa lagu sheegay in hay’addoodu ay Maraykanka ka saartay toddoba qof oo u dhashay dalka Kenya iyo 67 qof oo u dhashay Soomaaliya kuwaasoo haystay go’aanakii kama dambaysta ahaa ee dalka looga saari lahaa.
Hay’adda ICE ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in bartilmaameedkoodu yahay dadka aan sida sharciga ah ku jogging dalka Maraykanka iyo kuwa halista ku ah amniga Qaranka,Xasiloonida guud iyo ammaanka xuduudaha Maraykanka.
Sidoo kale waxa ay sheegtay iney bartilmaameedsanayaan dhammaan dadka ku xadgudbay shuruucda socdaalka Maraykanka iyaga oo xiraya ,haddii amar lagu bixiyo in dalka looga saaro ay fududeynayaan sidii dalalkooda loogu celin lahaa.
Qoraalka hay’addan ayaa intaas ku daray in 67 qof ee Soomaalida ah markii ay gaareen magaalada Nairobi in looga sii duuliyey Muqdisho halkaas oo mas’uuliyiinta Soomaaliduna ay xaqiijiyeen iney gaareen Muqdisho.